Chiaki: tamba yako PlayStation 4 vhidhiyo mitambo kubva kune yako Linux desktop | Kubva kuLinux
Iyo inozivikanwa Sony mutambo koni, iyo PlayStation 4achakurumidza kuve nemutsivi nekuvhurwa kwePS5 gore rinouya. Asi kune avo venyu vane PS4 yenyu uye vanoda kutamba mitambo yemavhidhiyo papuratifomu kubva kune yako GNU / Linux desktop, unofanirwa kuziva zvinogona kuitwa ndinotenda Chiaki software. Izvi zvinogoneka nekuda kwebasa rakanzi Remote Play iyo inosanganisira chishandiso cheJapan firm.
Kusvika ikozvino, Remote Play, inobvumidzwa kudzora kure kunyaradza mitambo yemavhidhiyo. Asi zvinosuruvarisa, chete Microsoft Windows uye Apple macOS anoshanda masisitimu akatsigirwa zviri pamutemo. Naizvozvo, pakanga pasina nzira yekuzviita kubva kune iyo GNU / Linux kugovera. Asi nekusvika kwechirongwa cheChiaki zvave kutokwanisika. Muchokwadi, naChiaki unogona kuzviita paLinux uye mamwe mapuratifomu.
Kana iwe uchida kutamba mitambo yemavhidhiyo ari kure kubva kune yako PlayStation 4, hauzodi rine simba giraidhi kadhi, RAM kana yepamusoro-inoshanda CPU, kana chero mhando emulator yemazita, nekuti vhidhiyo mutambo unoramba uchimhanya paPS4 yako. Kunyangwe izvo zvaunofanira kuziva ndizvo ane kunonoka zvishoma… Asi hapana chinhu chinogumbura muzviitiko zvakawanda.
1 Chiaki chii?
Chiaki ndeye yemahara, yakavhurwa sosi, isina kufanira PS4 Remote Play mutengi. Parizvino inoshanda paWindows, Linux, macOS uye zvakare shanda kuitira kuti igone kushanda pa Android munguva pfupi. Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti, kunyangwe usiri wepamutemo, haufanire kupaza jeri kana chero chinhu chakadai paPS4 yako, nekudaro, hauzoputsa warandi kana njodzi kuve nematambudziko anobva kune iwo maitiro.
Ramba uchifunga kuti Chiaki chirongwa chitsva kwazvo, ichine zvakawanda zvekuvandudza, asi chinoto shanda nenzira yakanaka. Zvishoma nezvishoma ivo vanozoisa zvinhu zvitsva. Chii chiripo panguva ino inosanganisira:
Hapana chikonzero chejerebreak
Unofficial, asi inoshanda mutengi yePS4 Remote Play
Yakazara skrini mode nekudzvanya F11
Unogona kudzima iyo console kubva pairi
Yekutenderera mitambo ine 1080p resolution yePS4 Pro vashandisi uye 720p yevashandisi vePS4. Chiyero chinogona kusiyana kubva ku60 kusvika ku30 FPS.
Tsigiro yeApple, manejimendi manejimendi, inobata paneli rutsigiro, inogadziriswa kiyi marongero, nezvimwe zvichasanganisirwa munguva pfupi iri kutevera.
Chekutanga pane zvese, kuti uwane rumwe ruzivo kana download Chiaki, iwe unogona kuzviita pano ..., kunyangwe kana iwe uchida iyo yakanangana chinongedzo kune iyo nzvimbo yekurodha yeiyo Binary inovaka izvo zviripo zveChiaki, zvirinani uende wakananga kunongedzo iyi. Paunenge uchinge waodhaunirodha kubva kune yepamutemo Github saiti, unogona kuimhanya kuti ishandiswe nyore, sezvo ichiuya yakarongedzwa mune yakasarudzika binary mhando AppImage. Iwe unongoda kuti zviitwe nemazvo nekudzvanya pazviri, Zvivakwa, Mvumo uye uchibvumira kuurayiwa (kana kubva munzira nemaShell ine chmod).
Iye zvino unogona kuzviita tinya kaviri paChiaki's AppImage kuti umhanye. Izvo zvinokwanisika kuti mune dzimwe nzvimbo dze desktop izvo zvisingaiti uye iwe unofanirwa kuzvivhura kubva kune iyo terminal ... asi izvo hazvizokanganisa vazhinji vashandisi nenzvimbo dzakakurumbira.
Iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unofanirwa kuve yakabatana neiyo LAN yakafanana nePS4 yako, kuti igone kushanda. Unofanira munyori yako PS4 kekutanga iwe kupinda muChiaki, iyo yasara yenguva iyo isingazodiwe. Nezve izvo iwe unofanirwa kuisa yako yekushandisa ID uye PSN PIN. Rangarira kuti pini inogona kuwanikwa kubva kumamiriro ePS4, mune sarudzo Remote Play Kubatanidza Zvirongwa.
Kamwe yakanyoreswa, kana yako PS4 koni iri kushanda uye ne mutambo wevhidhiyo unomhanyaZvese iwe zvunofanirwa kuita kubaya kaviri pane koni yekoni inowoneka muChiaki hwindo iwe yawakagadzirisa. Uye mutambo unozotanga kuonekwa uye iwe unogona kuzvidzora nemutongi akabatana necomputer yako kuburikidza neUSB ...
Uye kunakidzwa! Matanho mashoma mashoma ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Mitambo » Chiaki: Tamba Yako PlayStation 4 Vhidhiyo Mitambo Kubva kune Yako Linux Desktop
Uyezve info: Uye yakavakwa neQt.
China inounza 500 megapixel kamera ine huchenjeri hwekugadzira